Cajón de Sastre, umdla, umdla, umdla - Ikkaro
yokuqalisa >> Ezinye i zihloko
Olunye uxhakaxhaka kunye nezinto eziluncedo endingaqinisekanga ukuba ndingazibeka njani, nokuba kungenxa yokuba zingaphandle kwesihloko okanye ngenxa yokuba akukho mxholo owaneleyo okwangoku ukwenza icandelo lam.
Ingxowa exubeneyo engenguye intlekele yebhlog. Izihloko ezininzi ezingekho semxholweni eziwela ngaphandle kweendidi zebhlog eziphambili. Apha siza kufumana okuninzi kwayo yonke into enxulumene ne-DIY, kunye nezinto ezenziweyo.
Inzululwazi, iindaba, umdla, iindaba zezinto ezingenakwenzeka. Sisathetha ngeebhayisikile, iivili kunye noomatshini baseGoldberg, amaxwebhu, iifutshane, iinkqubo zeNASA oya kuzithanda ngenene.
Umbono kukucwangcisa le drowa ngokuhamba kwexesha kwaye uyiqokelele kwimixholo. Kodwa uyazi ...
El Carmen de Onda iMyuziyam yeNzululwazi yezeNdalo
Ngo-Agasti 3 satyelela iMuseo del Carmen de Onda. Imyuziyam yesayensi yendalo ngokuqinisekileyo iya kuvusa umdla wawona mancinci amalungu osapho. Kufanelekile ukwenza utyelelo oluya kuthatha malunga neeyure ezi-2 kwaye oluxabisa i-5 ye-euro ngomntu ngamnye okanye ukulungiselela uhambo lwesikolo.
Ukuba ukwindawo ungandwendwela imyuziyam kunye ne Imiqolomba yaseSan José kwiVall d'Uixó.
Nge-14 ka-Agasti senza olu tyelelo kunye namantombazana. Nangona eyona ndawo aziwa kuyo ilNjengoCuevas de San José kunye nomlambo ongaphantsi komhlaba, i-200m ukunyuka intaba unendawo ye-Iberia-Roman town, eyiAsethi yoMdla weNkcubeko. Ke kufanelekile ukuba undwendwele ngokudibeneyo. Ewe, kwidolophu endikucebisayo ukuba uhambe nesikhokelo ukuba ufuna ukufumana into.
Kuyamangalisa ukuhamba okanye ngaphandle kwabantwana kwaye kufanelekile ukuhamba nabo, bashiywe bevule imilomo kuhambo lwemizuzu engama-40 kwaye emva koko iyasivumela ukuba sibachazele izinto ezininzi.
Kwimingxunya abavumi ukuthatha iifoto, ngaphandle kwento ethile kwaye siyenza ngaphandle kweflash. Ke ndishiya kuphela iifoto ze-2 zam kunye nezinye endizithathileyo kwiwebhusayithi esemthethweni.
Esi sithuba sazalwa ngenxa yenqaku Kushushu kakhulu ukuhlala epapashwe kwi-National Geographic kaJulayi ka-2021 kwaye yabhalwa ngu-Elizabeth Royte, apho ungabona khona iingxaki ezibangelwa bubushushu obugqithisileyo ebantwini nasemizimbeni yabo, ingxaki yamaqondo obushushu anyukayo eMhlabeni nakwezobuchwephesha bomoya kunye nendlela yokuphucula.
Kukho ingxaki enkulu. Ukulwa namaqondo obushushu aphezulu kunye neziphumo zawo sifuna ifriji. Kodwa isebenzisa isixa esikhulu sombane kwaye abantu abangakumbi nangakumbi, ngakumbi kwiindawo ezihlwempuzekileyo, baya kuyidinga.
Njengoko kubonisiwe kwicandelo lengxaki, idatha yoyikeka. Sele kukho amanyathelo okufumana iindlela ezintsha zokupholisa kunye nokuphucula ukusebenza kwezixhobo ezikhoyo. Ukuba ufuna iprojekthi entsha oza kuzinikela kuyo, inokunceda abantu abaninzi.
Umxholo ofanayo ekuthethwa ngawo eIkaro yayikukwakhiwa kwefayile ye- ifriji esebenza ngaphandle kombane.
Amachibi amakhulu eMntla Melika
Eli nqaku ngamanqaku athathiweyo Amachibi amakhulu eMntla Melika, umhlaba omkhulu endiwuthandileyo. Amanqaku athathwe kwinqaku kwaye avela kwi-National Geographic documentary, ndishiya i-bibliografi ekugqibeleni.
Ndiyathemba ukuba uyonwabele kwaye uyifumana iluncedo kuyo yonke imihla endiyishiyileyo. Ngoku xa ndifunda ngamaNdiya omthonyama ahlala kule ndawo ndiza kuba nakho ukuqonda ubukhulu bayo.
Iinoveli kunye nezincoko esithethe ngazo kwibhlog yethu kwaye zisetelwe eNative North American Comanche kwaye Ihashe eliCrazy kunye neCuster
Ndiqalile ukuthumela "kwakhona" kwisiteshi se-YouTube. Ngexesha leminyaka bendishiye iividiyo ezili-12 malunga nezinto ezahlukeneyo, kodwa ndiye ndaqala ukupapasha rhoqo.
Iividiyo ezintathu zokugqibela endizirekhodileyo zingqinelana nezithuba endizipapashileyo kwibhlog, kodwa ayisayi kuhlala injalo. Umbono wejelo le-YouTube kukuncedisa ulwazi kwibhlog kwaye ukuba ndiyaphumelela, inokuba nobomi bayo. Ndifuna ukupapasha izinto ezithile ezinomdla kodwa ezilula kakhulu ukuba neposti yam okanye ifomathi yevidiyo efanelekileyo ngakumbi kunale ibhaliweyo.
Ukuba ufuna ukubhalisa ungacofa apha siphantse saba ngama-300 :)
Iividiyo zamva nje ukuze ubone ukuba unomdla wokurhuma yile:
Imixholo emitsha kunye nolwalathiso olutsha lwewebhu
Ngoku ewe. Olu lolona tshintsho lukhulu e-Ikkaro kwiminyaka eli-12. Kwaye jonga, ndizenzile izinto kwiwebhu nakwiwebhu. Emva kokucinga okuninzi ndigqibe kwelokuba ndiyiguqulele i-Ikkaro kwiwebhusayithi yam. Kude kube ngoku yonke into endiyipapashileyo igqithisile isihluzo. Yonke into yayinxulumene ngokusondeleyo. Ngoku ezinye izinto ziya kubonakala ezinokuphambuka kwikhosi yesiqhelo. Kodwa ndiyazi ukuba kubalulekile nje ngesihloko esikhethiweyo yindlela, indlela yokubonisa kunye nokuhambelana nayo yonke iwebhu.
Ndifuna ukuba i-web ingabi sisiphelo kodwa ndiyisebenzise njengesixhobo, njengesixhobo. Ndifuna ukuyeka ukuthumela izinto ezigqityiweyo ukuqala ukuzisebenzisa ukuqokelela ulwazi kwizinto ekufuneka uzenzile. Ngezimvo ezivela, zovavanyo olungaphumeleliyo.
Kutheni ndingazukuxela amava okanye intetho endikhe ndanayo nomntu ukuba ndikhuphe izinto ezinomdla? Ukusukela ngalo mzuzu ndenza i-Ikkaro kuphela iwebhusayithi yam yobuqu, wonke umxholo uyatshintsha. Ndizophumelela kumnandi.
Ekugqibeleni, siyinto yonke esiyenzayo, yonke into eyenzekayo kuthi kwaye inomdla kuthi kwaye kulungile ukuyibonisa apha. Sele ndidibanise ezinye iiwebhusayithi kunye nemixholo ebendisasazile kwaye esele idityanisiwe eIkaro.
Izipho ezikhethekileyo ezivela kookumkani
Ndihlala ndabelana ngezipho zookumkani kwibhlog, phantse isisithethe. Ngethamsanqa bandishiya nezinto endizithandayo, ngaphandle kokubabuza kwaye oko kunika ithuba lokuthetha kwibhlog. Ngoku ngamantombazana amabini aneminyaka emi-3 nantlanu ubudala ngaphezulu kwezipho zam, ezakhe ziqala ukuba nomdla kakhulu.
Kulo nyaka ndithathe isigqibo sokuba ndingashicileli ukungena, emva koko ndothuka kuba ndicinga ukuba ayinamdla, abantu abaninzi bandibuza ngayo. Kwaye eli nqaku limalunga nabo, malunga naba bantu abandikhuthazileyo ngezimvo zabo kunye ne-imeyile. Ndiyaxolisa ngokulibazisa kupapasho, kodwa ngenxa yemicimbi yobuqu eyahlukileyo ibingazange ibekho ngaphambili.
Masihambe nomjikelezo onomdla kakhulu.
Itafile yam yokuBhala ye-85-LCD ye-LZS8,5 (iBhodi yeBoggie)
Eli libali lokuba kanjani Ndingaqondanga ndigqibele ndine-LCD Writing Tablet. Bendikhangela, njengayo yonke imihla kwaye ndibona isibonelelo kwiGearbest yento ebonakala kum njengecwecwe yemizobo yedijithali, sifana neWacom kodwa nge-8. Iiyuro ezisibhozo !!! Ngendlela ebimbi ngayo, bekufanelekile ukwenza izinto ezi-4 ngamanye amaxesha endinazo engqondweni. Ndiyithengile ke.
Ummangaliso uza xa ndiyifumana kwaye ndiyabona ukuba intle kakhulu kwaye ayinanto yokuyidibanisa naphina, okanye ukuyilayisha okanye nantoni na. Ndiye ndabuyela kwifayile kwaye ewe ... ndinayo i-LCD Writing Tablet, ethi ekubalekeni ndicinga ukuba igama liyandilahlekisa. Abanye bayibiza ngokuba yiBhodi yeBoggie, nangona olu luphawu olumele imveliso.
Ukukhangela kwam uKnoll kuqala ngaphandle kokuba ndikwazi kwimifanekiso kaTodd MacLellan kunye nencwadi yakhe Izinto zeza ngokwahlukana: Incwadana yemihla ngemihla yeTeardown yokuPhila ngoku Loo mifanekiso iqhushumbo yandenza ndathandana, kwaye ndikhangela ulwazi oluthe kratya malunga nombhali endimaziyo Ukuqengqa njengendlela yombutho, kodwa njengefom yobugcisa, ukwenza ubuhle kwizinto zemihla ngemihla.
Emva kweminyaka yokudibanisa izinto kunye nokushiya iziqwenga zayo yonke into ukuba ibe yinkululeko yokuzikhethela, kunokuba yeyona ndlela inomdla kwaye intle yokuqhubeka nokudibanisa. Indiqinisekisile.